Filastiiniyiinta oo dhigaya banaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan Xad gudubyada Yahuudda. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Filastiiniyiinta oo dhigaya banaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan Xad gudubyada Yahuudda.
Last updated Aug 3, 2019 342 0
Gabar yar oo kamid ah dadka ku dhintay duqeymaha Yahuudda.
Tiro dad oo kamid ah Muslimiinta falastiiniyiinta ee wajahaya falalka cadowtooyada kaga imaanaya Yahuuda ayaa ku dhaawacmay rasaas ay ciidamada Yahuuda ku fureen dibadbaxayaal kasoo horjeeda Yahuuda wali lagu deegaameynayo dhulka Falastiin.
Xaafadaha Waadil xumus ee bariga Qudus oo ay qabsadeen Yahuuda ayaa shalay oo Jimco ahayd waxaa ka dhacay isku soo baxyo looga soo horjeeday duminta guryaha reer falastiin iyo deegaameenta Yahuuda.
Goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in dad badan ay salaada jimcaha ku dukadeen xaafada Waadil Xumus iyagoo kasoo horjeesaday duminta Guryaha waxayna la kulmeen rasaas iyo sunta dadka ka ilmeysiisa oo ay banaanbaxayaasha u adeegsadaan ciidamada Yahuuda.
Meelo kale oo kamid dhulka ku jiray gacanta Gumeystaha yahuuda ayaa laga soo warinayaa in shalayto ay ka dhaceen banaanbaxyo looga soo horjeeda Yahuuda.
Magaalada Gaza ilaha caafimaadka waxay sheegeen in 37 ay ku dhaawacmeen rasaas ay ciidamada Yahuuda u adeegsadeen banaanbaxyaasha oo dalmanayay in Yahuuda joojiyaan dhismaha islamarkaana go’doonka laga qaado Gaza.
Dadka dhaawacmay waxaa ku jiray laba saxafi oo mid kamid ah ciidamada Yahuuda si bareer ah kaga toogteen luga isagoo ku guda jira tabinta banaanbaxyada.
Todobaadkii 69-aad ayay socdaan dibadbaxyada looga soo horjeeda Yahuuda kuwaasi oo maalin kasta oo jimcaha ah ay isku balansadeen falastiiniyiinta.
Axmad 3847 posts 8 comments
Dhagayso Barnaamijka Badqabka Cuntada (11).
Daawo Taxane: Ergadii Isku Dhiibay Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.(32)
Axmad	 Oct 23, 2021 0
Weeraro ka dhacay qeybo kamid ah gobolka Jubbada Hoose iyo Gedo.…